Eps Machine, Eps ụfụfụ igwe, Eps Raw Ihe - Xiongye
Igwe eji ebu ụzọ
Block Nkedo Machine
Udi Nkedo Machine
Full Automatic Nkedo Machine
Ọkara akpaka Nkedo Machine
Panel ọnwụ igwe
CNC Cutting igwe
Pu raygba Machine
Amfụfụ ise n'elu
EPP amfụfụ Product
Ihe mgbochi ICF
EPS amfụfụ Kpụrụkpụrụ Ọlamma
EPS amfụfụ Ule Ule tube
EPS ụfụfụ Ice Ude Box
Fofụfụ Weighting mmako
Hebei XiongYe Machine Trade Co., Ltd e guzobere na 1998, ọ bụ a enyemaka nke Hebei XiongYe Group ụlọ ọrụ. Hebei XiongYe Group gụnyere Xinji Changxing Plastic Machine Factory, Hebei XiongYe Machine Trade Co., Ltd, Hebei Nuohang Technology Co., Ltd.
Anyị factory ga-ebute nke abụọ frasi nke anyị development atụmatụ. Companylọ ọrụ anyị na-elele "ọnụahịa ezi uche dị na ya, oge nrụpụta nke ọma yana ọrụ azụmaahịa dị mma" dị ka ụkpụrụ anyị. Anyị na-atụ na-ekwenyere ndị ọzọ ahịa maka ibe mmepe na uru. Anyị na-anabata ndị na-azụ ahịa ka ha kpọtụrụ anyị.
Afọ 22 nwere ahụmahụ
Ihe karịrị mmadụ 300
PSF M Pịnye Full Automatic Discontinuous Nga expander
Okwu Mmalite • N'ịnabata Programmable Logic njikwa (PLC), igwe ghọtara akpaka ihe nri, electronic erikpu, okpomọkụ ịchịkwa na ihe onwunwe larịị akara, wdg • Nke nwekwara ike-melite na njupụta akara usoro dị ka ọrụ 'chọrọ ịghọta akpaka nwere ọgụgụ isi mmepụta ihe; • Site n'iji ngwaọrụ juputara na ngwa elektrọnik yana nke mechiri emechi ụfụfụ na teknụzụ na-achịkwa nrụgide, igwe ahụ nwere ike ịlele ya.
Full Automatic agụụ Panel Machine
Nkwupụta Ngwaahịa • A na-agbanye igwe site na nchara profaịlụ nchara na ọgwụgwọ kpo oku nke nwere ike iweta ike dị elu, enweghị nrụrụ na nguzogide dị elu nke ike na-abawanye site na ngwaahịa dị elu. • Igwe na-achịkwa igwe na-ekpuchi igwe na-ekpuchi igwe na-arụ ọrụ nke nwere ike ịghọta arụmọrụ zuru ezu nke na-arụ ọrụ nke na-emeghe, na-emechi ihe, nri nri, ikpo ọkụ, na-echekwa okpomọkụ, na-eme ka agụụ na-ekpo ọkụ, na-apụ apụ na ngwaahịa ndị agwụla. • Ndị su ...
1.Control System: A na-ejikọ igwe ahụ na ihe ndị eji eletrọnịkị nke mba dị elu na PLC Programmable Logic Controller (Germany, Siemens) na onye na-ekpuchi ihuenyo mmetụ China. Na ọtụtụ nchedo onwe na mkpu usoro, ọ na-adị mfe rụọ ọrụ iji mepụta mmepụta akpaka site na nri, njikwa okpomọkụ, ntinye, nrụgide, wdg. 2.Work ụdịdị: Ọ na-arụ ọrụ na abụọ ụdịdị: nkịtị nri na mgbali nri nke ihe onwunwe, na abụọ ụdịdị nwere ike Switched dị ka struct ...
Ọkara akpaka Type akpụ Machine
Okwu Mmalite • Ọ na-agbakwụnye sistemụ mmemme njikwa (PLC) dabere na igwe na -emepụta ngwa ngwa, nke nakweere igwe eletriki na pneumatic dị elu, yana ọrụ nwere ike gbanwee na akpaghị aka na aka. Ọ bụ mmalite mmalite ma nwee ike ịgbanwe usoro kpo oku dịka ụdị ngwaahịa si dị. • Ọ lowers oru chọrọ ka rụọ na niile arụmọrụ nwere ike na-achịkwa PLC. • N'out oge nri nke otutu nri inlets ukwuu na-azọpụta nri oge. • Ti ...
Full Automatic tingcha Machine
Okwu Mmalite • A na-agbanye igwe akụrụngwa nke igwe site na nchara profaịlụ nke nwere akụkụ siri ike, ike dị elu na enweghị nrụrụ. • Igwe ahụ nwere ihe ntanetị, nkwụsị na ịkụcha ihe ma nwee ike ịghọta nkwụsị 3-ntụgharị, ntụgharị ntụgharị, nkwụsị na ịkụcha osisi. • Igwe ahụ jikọtara ya na njikwa ugboro iji ghọta oke (0-4m / min) nke na-agbazi ọsọ ọsọ na nke na-adịghị mma nke kwesịrị ekwesị maka ihe achọrọ maka obere ọsọ ọsọ na nnukwu ọsọ r ...
Ọnụọgụ Fofụfụ tingcha Mbadamba
Okwu Mmalite • Akpadoro igwe nke igwe nke aluminom alloy profaịlụ nke ejikọrọ site na nkwonkwo puru iche nwere oru na arụmọrụ, ezi uche odidi, nkenke nkenke, oru di mfe ma di nma nke puru ichebe oge, ike na akuku; Ọ nwere ike belata ọtụtụ ụdị akụkụ abụọ na akụkụ ntụgharị, nke a na-ejikarị ebipụ ebu ebu na ọtụtụ akụkụ dị ka ihe ndị Europe, T slot board, column, pellet, wdg.
EPS amfụfụ mkpuchi igwe dị ezigbo mkpa igwe dị ka na-ekpo ọkụ waya CNC ụfụfụ ọnwụ igwe, maka ụlọ ọrụ, nke na-emepụta ji achọ ụkpụrụ ụlọ ụfụfụ shapes. Elu nke ụdị ihe eji achọ mma, nke sliced ​​site na EPS blocks, kwesịrị itinye ya na igwe mkpuchi ụfụfụ, maka ichebe ụlọ ahụ site na ọnọdụ ihu igwe na-emebi emebi (dị ka mmiri ozuzo, snow, akụ mmiri mmiri, oké ifufe na esemokwu ọnọdụ dị n'etiti ehihie na abalị) , can't gaghị enweta mbụ mma ngwaahịa ma ọ bụrụ na gị na ụfụfụ mkpuchi mach ...
Polyurethane ịgba ụfụfụ igwe
Ntughari igwe: Polyurethane foaming material nwere ọtụtụ uru dị ka ntinye, ikpo ọkụ, mkpọtụ mkpọtụ na anticorrative wdg A na-eji ọtụtụ ebe. Pu ịgba igwe uru: 1. Pneumatic pressurizing ngwaọrụ nwere njirimara nke obere size, ìhè arọ, ala ọdịda ọnụego, mfe ọrụ na-adaba adaba ije; 2. Advanced ventilashion ụzọ ma ...
eps ụfụfụ chaplet
EPS foam beads are produced by EPS pre-expan ...
EPS ụfụfụ igbe
Ndị na-ekpuchi mmiri na-echekwa mkpuchi ahụ na ...
EPS ụfụfụ ọbara ule tu ...
Okwu Mmeghe guzobere na 1998, XIONGYE chepụtara ...
EPS ụfụfụ Packages
EPS - nke a makwaara dị ka polystyrene gbasaa ...
Okwu mmalite EPS - makwaara dị ka gbasaa ...
EPS ụfụfụ ịkụ azụ na-ese n'elu mmiri
Nkọwa High Quality - Mere nke elu q ...
EPP ụfụfụ igbe
EPP bụ ụdị polypropylene plastic foaming ...
EPS 3D ogwe
Okwu Mmalite: 3D mgbidi panel bụ ụdị ọhụrụ ụdị ...
EPS (Expandable Poly Styrene) bụ lightweig ...
Webata: ụfụfụ weighting gị n'ụlọnga bụ ọhụrụ anyị pro ...
STMMA copolymer chaplet bụ copolymers nke styrene ...
Ọrịa Na-efe efe Na-ebelata Erụ Ọrụ Ike
A na-atụ anya ịrụ ọrụ ike na ndekọ afọ a ọganihu ya kachasị ike na afọ iri, na -emepụta nsogbu ndị ọzọ na ụwa iji nweta ebumnuche ihu igwe ụwa, International Energy Agency (IEA) kwuru na akụkọ ọhụrụ na Tọzdee. Ntuba nke itinye ego na nsogbu aku na uba akara ...
Njikere ịmụtakwu banyere CNC igwe?
1.What Bụ CNC machining? Usoro CNC bụ ndebiri nke "akara ọnụọgụ kọmputa", nke dị iche na njedebe nke njikwa akwụkwọ, si otú a dochie njedebe nke njikwa akwụkwọ. Na ntuziaka na-achịkwa, achọrọ onye ọrụ saịtị ka ọ kwụọ ma duzie nhazi site na jo ...
Mpaghara North, Nanlv Industrial Mpaghara, Xinji City, China